Dowlada India oo in ka badan 1 bilyan qof ku amartay inay guryahooda joogaan 21… – Hagaag.com
Dowlada India oo in ka badan 1 bilyan qof ku amartay inay guryahooda joogaan 21…
Posted on 25 Maarso 2020 by Admin in World // 0 Comments
Dowlada India ayaa bilowday dadaalo ay ku dooneyso in looga hortago in caabuqa Coronavirus uusan dalkeeda ku faafin, xili ay sii kordhayaan kiisaska la xariira Coronavirus ee dalkaasi laga helayo.
Dowlada ayaa bandow adag gelisay dhamaan waddanka, waxaana bandowgan sababay in dad ka badan 1 bilyan iyo saddex boqol oo milyan oo qof in ay guryahooda joogaan muddo 21 maalmood.
Ra’isul wasaaraha India Narendra Modi ayaana shalay ku dhawaaqay go’aankan bandowga lagu galiyay dadka India, waxa uuna Ra’isul Wasaaraha ugu baaqay shacabka in aysan argagaxin ayna ku sugnaadaan guryahooda.
Bandowga ayaa xalay saqdii dhexe ka hirgalay guud ahaan dalka India, waxaana dukaamada iyo suuqyada dalkaasi kahor bandowga laga dareemayay cariiri badan si dadka usii iibsadaan waxyaabaha laga maarmaanka u ah nolosha.
Dalka India ayaa laga diiwaan galiyay In ka badan 500 oo kiis oo coronovirus ah, waxaana jirta cabsi badan oo laga qabo in dalkaasi ku sii faafo maadaama aysan dowlada horey u sameyn dadaalo badan oo looga hortagayo cudurkaasi.